Deadbeats na Ngosipụta? Twitter - Ngwá Ọrụ Nchịkwa Ọhụrụ AP | Martech Zone
Deadbeats na Ngosipụta? Twitter - Ngwá Ọrụ AP Ọhụrụ
Tuesday, August 11, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Bọọlụ Lorraine
Anọ m na ajọ ọnọdụ ụnyaahụ n'ihi na m na-achụ akwụkwọ ego na-egbu oge n'aka ndị ahịa atọ. Adị m iwe iwe, ọ dịkwa m mkpa ịpụ, n'ihi ya, etinye m okwu na-adịghị ọcha (ọ bụghị nke dị ọcha) na Twitter. Ajụrụ m:
Mgbe onye ahịa anaghị akwụ ụgwọ ma zere oku ekwentị gị, ọ dị njọ ịkpọ aha ha na Twitter?
Nzaghachi m nwetara sitere na ndị enyi na-agwa m na ọ bụ echiche jọgburu onwe ya, na mmadụ ole na ole chere na ọ nwere ike ịdị irè, nye ụfọdụ ndị nyere ya echiche miri emi na echiche ole na ole na-atọ ụtọ na ngwakọta: ọkacha mmasị m:
@wolfems onye kwuru, "Ahụrụ m ya n'anya… Mee ya na Sọnde ma ọ nwere ike ịbụ mkpado ọhụrụ, SundayShame. Newdị AP ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na enwere m obi abụọ na m ga-eziga ọkwa DEADBEAT n'oge ọ bụla, ọ welitere ajụjụ ụfọdụ na-adọrọ mmasị. Dika intaneti na eme ka azumahia gosiputa uzo, o gha eme ka uzo nile megharia uzo? Nke ahụ ọ na-akpata nsogbu ma ọ bụ mmelite mmekọrịta mmekọrịta?
Enweghị m azịza ya, mana ọ ga-amasị nzaghachi. Kedu ka obi dị gị banyere ịmekwu ozi n'ihu ọha, kedu ka ị si eji Social Media taa iji mee nke ahụ?
Tags: nwụrụọha shamingịme iheahịa mmadụelekọta mmadụ media shamingTwittertwitter na -akparị
Ebumnuche Onye Ikpe Si Echiche nke Ndị Na-ege Ntị
Ahia dika Mama Blogger
Aug 11, 2009 na 6:10 PM
Y’oburu n’ile ichikota ebe a na achikota ndi mmadu, ha na-edeputa ahuhu n’ime nmekorita ha na ibe ha, nke a na akwado ugwo. Ugbu a, nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụ otu ihe ahụ na ụfọdụ ndị ọkachamara dịka azụmahịa 'azụmaahịa', mana ụfọdụ azụmaahịa emeela. Kedu ihe kpatara ndị ahụ ji ewepụta oge iji depụta aha 'ezigbo ndị ahịa' ma nye ha ndụmọdụ.
M na-ele anya n'ọchịchị ọlaedo, imere ndị ọzọ wo .nke m choro ka mmadu tinye aha m ihe na adighi nma? Mba Ekwesịrị m ịme usoro azụmahịa siri ike - Ee. Kedu nke ga-egbochi nke a kpamkpam.
Agaghị m atụ aro ịkọ aha mmadụ / ụlọ ọrụ aha, n'ihi na na njedebe ọ na-atụgharị uche n'àgwà gị. Mana ọ bụrụ na ha nwere ụfọdụ ụdị mmadụ na ntanetị nke na-abụghị aha ha kpọmkwem, mgbe ahụ echere m na mgbe emechara ya ọ nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ebumnuche bụ ịdọ ndị ọzọ aka.
Aug 11, 2009 na 6:15 PM
Anọ m niile maka ịdọ aka ná ntị ahụ siri ike, Lorraine. Enweghị m nsogbu na - apụ apụ - ọ bụrụhaala na ha maara ihe ga - esi na ya pụta. My usoro ga-email> olu> na onye (ma ọ bụrụ na o kwere omume)> ọka iwu… na mgbe ahụ ma ọ bụrụ na a ka nwere dịghị nzaghachi = ọha.
Anọ m n’etiti mmalite mmalite ugbu a ma anyị nwere akwụkwọ ọnụahịa dị oke mkpa; agbanyeghị, anyị na ndị mgbere anyị nwere nkwekọrịta na anyị ga-akwụ ụgwọ naanị mgbe anyị nwetara ego itinye ego. Echere m na anaghị m ahụ aha m na Sunday ọ bụla n'oge adịghị anya!
Aug 11, 2009 na 2:54 PM
N’ezie o mebiri nkwekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị mmadụ na-atụ anya na a ga-edebe ihe gbasara ego nke ọma, nke ka nke gbasara oge na etu esi akwụ ụgwọ.
Agbanyeghị, ịnwere ike ịmalite onye ahịa ị ga-ebipụta akụkọ ha niile, nke ọma na nke ọjọọ. Nke a bụ maka arụmụka ego nzuzo - onye ọ bụla nwere ike ịgbaso esemokwu ahụ, mana ịme mgbanwe ahụ buru oke ibu maka ọtụtụ mmadụ iji tụlee nke ọma.
Aug 13, 2009 na 3: 08 AM
Anyị na ndị ahịa na - arụ ọrụ, ma na - ebu akwụkwọ ọnụahịa ọtụtụ ọnwa. Onye kacha dị ogologo bụ onye ahịa nke kwụrụ $ 200 / ọnwa maka ọnwa 18. Adị m mma na nke ahụ ma ọ bụrụhaala na ha na-agwa m okwu.
Agaghị m achọ ime nke a, mana ide ya mere ka m nwee mmetụta ka mma! Daalụ maka nzaghachi.
Aug 14, 2009 na 3:07 PM
Echeghị m na ikenye ndepụta nke ndị na - eme ọnwụ ga - eme ihe ọ bụla - ọ gwụla ma ọ ga - eme ka onye ahịa ahụ were iwe were were ya rụ ọrụ iwu. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụghị ... ..nice. N’aka nke ọzọ, akwụkwọ ozi siri ike sitere n’aka onye ọka iwu gị nwere ike ịdị irè.
Ọtụtụ mgbe m na-eche na ọ nwere ike ịba uru ịnwe ndepụta "anụ arụ / mma" n'etiti ndị ọrụ ụlọ ọrụ ka anyị wee nwee ike izere ịrụ ọrụ maka ndị ahịa na-agaghị emeso anyị nke ọma.
Aug 14, 2009 na 3:08 PM
N'ịbụ onye nwere obere azụmaahịa na-enweghị oke ego, dịka m ga-achọ, aga m ekwu okwu parrot Jay. M ga-enwe obi ụtọ ịhụ aha m tweeted n'ihi nke a? Mba Mana, enwere m nsogbu ọ bụla na tweeting gbasara ahụmịhe ọrụ ndị ahịa (ma ọ bụ nke pụrụ iche)? Ọbụghị ncha ncha!
Aug 14, 2009 na 3:09 PM
Debe ya na nzuzo! Otu ụbọchị ihe nwere ike tụgharịa na ị na-achọghị ka ọkụ àkwà mmiri. M kwere na Ohere inweta bụ ma ọ bụrụ na ị na-achụ nta maka ịkwụ ụgwọ otú ahụ bụ ọtụtụ ndị ọzọ. Achọpụtala m na ọtụtụ ndị chọrọ ime ihe ziri ezi ma kwụọ ụgwọ ahụ. O di nwute, mgbe ugwo na-adighi nwayọ n’akuku nnata ya na-adighi nwayọ n’akwu ugwo ma n’agha ahu. Onodu aku na uba a choro mmata na uche nke ga enyere onwe ya aka ikwado ibe anyi na ahia rue mgbe anyi huru uzo di ukwuu na mgbake nke onodu aku na uba a.
Aug 14, 2009 na 4:27 PM
N’onwe m, ọ na-adị m ka mmadụ iziga ndị ahịa ya ọ̀ dị njọ.
ha nwere ike ịnwe ezigbo ihe kpatara ya na akụnụba a maka ịkwụ ụgwọ oge dịka ịgwọ ọrịa, ịgba akwụkwọ n'ụlọ ọrụ wdg. na ihere na ejighị n'aka ihe ga-eme maka ọnọdụ ahụ.
otu onye ga-akpachara anya maka ihe ị na-ezigara ndị mmadụ na iwe.
A chụrụ m n'ọrụ 7 afọ gara aga site na nnukwu ụlọ ọrụ ebe a ma chọpụta na onye njikwa ochie m na ụlọ ọrụ ahụ nwere akaụntụ twitter ma na-eziga ozi ụgha na-adịghị mma banyere ME ma amaghị m ihe kpatara ya?
Aug 15, 2009 na 7:35 PM
Na ọnọdụ brik na ngwa agha, nke ahụ ọ dịghị ka ịdebanye nlele ọjọọ nke mmadụ karịa ndekọ? N'aka nke ọzọ, dabere na ndị na-ege ntị, ọ nwere ike ịrụ ọrụ iji mee ka akwụkwọ mmado dị njọ dị ka ọnwụ, ma ị chọghị nke ahụ.
Aga m ahapụ ihere ọha na eze na ya. Enwere akụkọ Ripoff mgbe niile.
Aug 16, 2009 na 12: 17 AM
Ndi mmadu ndi ji gi ego na eme ihe ato:
1. Ọ na-egosi na enweghị ike ịtụkwasị gị obi iji akọ na-ejikwa ọnọdụ ndị siri ike.
2. Ọ bụrụ na onye ahịa gị na-enwe nsogbu, post gị nwere ike igbu mgbali ha ịnakọta ego ma ọ bụ nweta azụmahịa ga-akwụ gị ụgwọ.
3. Site na ịpụ onye ahịa gị, ị na-ezigara ndị ahịa n'ọdịnihu ihe mgbaàmà na ị ga-emeso ha otu ụzọ.
Ga-apụ naanị ndị mmadụ mgbe ị kpebiri iwepụ ha ụlọ ikpe. Mmekọrịta agbagburu ebe ahụ.
Aug 16, 2009 na 3:14 PM
Dị ka oge niile oge m ji agụ akwụkwọ Doug gosipụtara ezigbo oge m. Anyị niile nwere ike ịkọwa na ebumnuche ya, onye na-anọghị n'akụkụ abụọ nke akụkọ ahụ ma ọ na-adighi ahụ iru ala ịnọ na ọnọdụ ọ bụla.
Enweghị mmerụ ahụ emere na nkwụsị gị ma achọpụtara m na ị kpalitere mmeghachi omume ọzọ, dị oke mkpa, karịa ka ị tụrụ anya.
Maka m, Maazị Karr, nke a bụ ihe atụ ọzọ nke ezi ike na uru dị na obere Indiana… anyị ekwesịghị ịla azụ ma ọ bụ leda anya etu mkpa echiche anyị dị ugbu a nwere ike isi wepụta echiche sitere n'aka ndị ọrụ maara ihe na ndị ebumnuche anyị.
Onye ọ bụla na-aza ajụjụ ebe a gbakwunyere ọdịnaya bara uru na ime nke a enyeghachila m ohere iji mepee ụwa m na ozi ka m na-eme ka m baa ọgaranya n'ụzọ ka ukwuu site n'igosipụta akparamaagwa na ọgụgụ isi ha na inyeghachi ihe atụ nke otu akụ bara ụba obere Indiana nwere ike isi bụrụ anyị niile.